Tababar ku saabsan nidaamka fadaralisamka JDFI iyo hogaaminta. - Cakaara News
Tababar ku saabsan nidaamka fadaralisamka JDFI iyo hogaaminta.
Jijiga.(CN) talaado, December, 1, 2015, Waxaa ka ka furmay xarunta deegaanka ee jigjiga tababar ku saabsan nidaamka faderaliisamka iyo hogaaminta kaasi oo kor loogu qaadayo wacyiga iyo garaadka siyaasadeed ee hogaaminta sare ee dhinaca arimaha faderalisamka.
Tababarka oo ay fulintiisa iska kaashadeen golaha faderaalka, forum federation iyo center of creative leadership oo laga fulinayo deegaanada dalka ayaa waxaa loo qabtay hogaaminta sare ee DDSI. Waxaana furitaankii tababarkaasi ka hadlay afhayeenka golaha xildhibaanada DDSI ahna gudoomiyaha XDSHSI mudane maxamedrashiid isaaq.
Afhayeenku Isaga oo ka hadlaya ahmiyada uu leeyahay tababarkani waxa uu yidhi”sidaad ogsoontihii wadan keena itoobiya oo ay ku nool yihiin shucuub, qoomiyada iyo dadyaw kala duwan ayaa waxa uu ku dhaqan yahay nidaam fadaralisamka ah kaasi oo aas aas kiisu yahay qoomiyadaha afka qalaad lagu yidhaahdo ethnics based federalism taasi oo ay qoomiyad waliba kaga faa’iidaysanayso xuquuqaheeda dastuuriga ah. ujeedada tababarkana waxaa looga gol-leeyahay in la gaadhsiiyo dhamaan hogaaminta shucuuba qoomiyahadaha dalkeena itoobiya si ay uga faa’iidaystaan tababarka nidaamka fadaralisamka .
Wuxuuna afhayeenku hogaaminta ku booriyay in mudada uu socdo fahan balaadhan ka qaataan nidaamyada, xeerarka iyo shuruucaha faderaalisamka dalkeena itoobiya. Tababarkan oo socon-doona mudo 5 maalmood ah ayaa waxaa cashiro ka bixinaya khabiiro heer deegaan ah oo tababarka tababarayaasha ku soo qaaday magaalada Awaasa kuwaasi oo kaashanaya khabiiro ka socda golaha faderalka iyo waliba center of creative leadership.